Mogadishu Journal » 2017 » January » 10
Madaxweyne Xassan Sheekh oo war ka soo saaray xiisada Galmudug
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay xasillooni darro siyaasadeed oo xiligaan ka dhacada degaanada Dowladda Gobolleedka Galmudug oo horumar ku tallaabsaday mudada uu jiro. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan xiligaan la aqbali karin khalalaase...
Madaxweynaha Galmudug oo soo rogay xaalad deg deg ah
Mjournal :-Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo Maanta ay Kalsoonida kala Laabteen Xildhibaanada Dowlad Goboleedka Galmudug,asna uu ku tilmaamay Sharci daro ayaa Wareegto ka soo baxday waxaa Xaalad Deg Deg ah uu ku soo rogay Degaanada Maamulka Galmudug. Madaxweynaha...
Warbixin la xiriirta afduubka maraakiibta caalamiga ah sanadkii 2016ka
Mjournal :-Warbxin ay soo saartay hay’adda Caalamiga ah ee kormeerka iyo ilaalinta Badaha Sanadkii 2016 kii ayaa sheegtay in afduubkii Markiibta uu Sanadkaasi ahaa mid uu hos u dhacay gaarayna 191 dhacdo, halka sadandkii ka horeeyay 2015 kii uu ahaa 246 fal afduub Marakiib ah....
Tirada dalalka ka qeyb-galaya cayaaraha aduunka oo la kordhiyay
Mjournal :-Kooxaha ka qaybgala Koobka Adduunka ayaa laga dhigay 48 dal halkii ay horay uga ahaayeen 32 sida ay go’aamisay Xiriirka Kubadda Cagta Aduunka ee Fifa. Isbadalkan ayaa dhaqan gali doona tartanka Koobka Adduunka ee dici doona sanadka 2026 . Fifa ayaa isbadalkan samaysay...
Xildhibaano loo dhaariyay maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe
Mjournal :-Magaalada Dhuusa-mareeb ee gobolka Galgaduud lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Ahlu sunna ee gobolada dhexe. Maamulkaasi ayaa shalay yeeshay xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaankaasi, waxaana maanta lagu dhaariyay magaalada Dhuusomareeb...
Madaxtooyada oo ku gacanseyrtay go’aankii xildhibaannada ee xil ka qaadista
Mjournal :-Madaxtooyada Galmudug ayaa ka war ka soo saartay kulan maanta ka dhacay magaalada Cadaado kaasoo looga hadlay go’aankii ka soo baxay Baarlamaanka Galmudug. Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in ay dhisan yihiin dhamaan Hay’addaha Dowladda Galmudug. Warsaxaafadeedka ayaa...
Xildhibaannada Galmudug oo kalsoonida kala laabtay Madaxweyne Guulleed
Mjournal :- Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Cadaado ayaa goordhaw codka kalsoonida waxa ay u qaadeen Madaxweynaha Maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed oo horey mooshin looga gudbiyay. Kulanka Baarlamaanka Galmudug waxaa soo xaadiray 54-Xildhibaan...
Xildhibaannada Galmudug oo u fadhiya xil ka qaadista Cabdikariin Xusseen Guulleed
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegaya in xildhibaannada dowlad gobolleedka u fadhiyaan cod loo qaadayo mooshinkii aydhawaan ka keeneen madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed. Xildhibaanada Shirsan ayaa waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka...
Diyaargaroowga doorashada guddoonka baarlmaanka Soomaaliya oo socta
Mjournal :-Waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaargarowga doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku tartamayaan ilaa afar musharax. Sida guddiga qaban qaabada doorashada ay shaaciyeen waxaa maalinta berri ah la filayaa in magaalada Muqdisho lagu qabtaa...